Faa'iidooyinka Caafimaad Ee Kalluunka Salmon - Daryeel Magazine
Faa’iidooyinka Caafimaad Ee Kalluunka Salmon
Waxaan rabaa maanta inaan isla eegno faa´iidada uu kalluunku u leeyahay jidhkeena iyo walabi sida uugu wacan oo loo cuni karo. Inkastay kaluunada oo dhama ay wadda leeyihiin anfacaad badan oo ay ka siman yihiin, inshaAllah week walbana kaluunada mid kamid ah ayaanu isla qaadaa dhigi. Balse maanta waxaynu ku bibaabanaynaa kalluunka loo yaqaan Salmon. Waana kalluunkan aad sawirka midig ka arkaysid.
Waxaa kujira protein aad u sareeya oo ka qayb qaata dhisida iyo isku dheelitirida cells ka jidhka oo dhan.
– Waxaa ku jira Marine omega-3 fatty acids, oo ka hortaga wadna xanuunka iyo xanuunada la xidhiidha wadna.
– Waxaa kale oo ku jira wax maadaayin u fiican kobcinta maskaxda. Taas oo kor u qaada , fahanka,xasuusta, iyo waliuba araga indhaha.
– Waxaa kujira kaluunkan Vitamin D, oo ka qayb qaada isku dheelitirka Calsium balance ee jidhka, vitaminkan oo caawiya markaa dhisida iyo daryeelka lafaha.
– Waxaa kale oo kujira Selenium oo ah maado muhiim ah oo ka qayb qaadata inay enzyme yada la dagalaama wixii nadiifinta chemical processes ee jidhka wax yeelo u .
Haddaba intaa aynu kor ku soo sheegnay oo dhan waxaa dheer in uu dufanka kaluunku ka qayb qaato:
– Dhisida difaaca jidhka
– Daryeelka timaha
– La dagaalanka in maqaarku ku qalalo
– Ka hortaga la dagaalanka xanuunka Cancer ka
Haddaba cilmi baadhistu waxay inoo sheegaysaa in uu kalluunka intaas oo faa´iido leeyahay ee ha moognaan inshaAllah.
InshaAllah halkan ka baro si yar oo fudud oo aad u karsan kartid cunto isku dheeli tiran oo uu ku jiro kalluunka Salmon
Halkaan ka daawo afur laga samaynayo kalluunka salmon iyo baradhada macaan:
Cuntooyin Jidhka Ka Saara Dufanka Cuntada Ee Khataraha Caafimaad Ee Badan Keena. Faaiidooyinka Cabbitaanka Raqayga (Xamarta) Iyo Ahmiyaddiisa Bisha Ramadaan Waxtarka Caafimaad Ee Qorfaha